ILake Loft- Ethokomele & Yesimanje, Downtown McCall
(206 okushiwo abanye)
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Tricia
ILake Loft iyisitudiyo esithokomele, sesimanjemanje, enkabeni yedolobha iMcCall. Leli fulethi linekhishi eligcwele elinama-granite counter top, i-cookware, nomshini wokuwasha izitsha. Lena indawo ekahle yokubaleka kwezothando, isihambi sebhizinisi, izivakashi zomshado noma umndeni waba-3 ozohlola uMcCall. I-Lake Loft ithola ukukhanya kwelanga okuningi futhi inamakhethini amnyama ukuze ulale kahle. Ifulethi lisesitezi sesibili, lifinyeleleka ngezitebhisi noma ngekheshi.
Ngenxa yokwakhiwa kwebhilidi lethu, siyacela ukuthi kungabi ngaphezu kwabantu abathathu kulolu phiko, ukuze kube nokuphepha nomsindo.
4.92(206 okushiwo abanye)
4.92 · 206 okushiwo abanye
Simaphakathi nedolobha, ngakho izihambeli eziningi zipaka izimoto zazo futhi azivamile ukuzisebenzisa futhi ngesikhathi sokuhlala kwazo. Izindawo zokuhlala ziqhelelene nezindawo zokudlela, izitolo kanye nechibi elihle lePayette. *Sicela uqaphele ukuthi umgwaqo onguthelawayeka 55 uhamba edolobheni.
Siphethe i-McCall Sports Exchange, ngakho-ke siba sebhilidini njalo futhi siyathanda ukuhlangana nezivakashi zethu, nokho le yunithi iyazihlolela yona ngakho-ke ukuba khona kwethu akudingekile ukuze sithole ukufinyelela efulethini.